အိမ်ခြံမြေ, အိမ်ခြံမြေ | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
အမျိုးအစား: Real Estate, အပေါင်ခံ
ဒါကြောင့်စောစောပေါင်နှံငြိမ်းအေးရန်လိုအပ်ပါသည်ရှိမရှိ? အဘယ်သူမျှမအကျိုးကျေးဇူးများကိုတစ်ဦးချင်းစီကဘဏ်ဤအခြေအနေတွင်၎င်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုပူဇော်နိုင်ပါတယ်ပေမယ့်, စာချုပ်ထဲမှာရည်ညွှန်းရှိသူများအနေဖြင့်စိတ်ဝင်စားမှုပေးဆောင်ဒါကြောင့်ကျွန်မနှင့်အတူဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အကြံပြု ...
သားဖွားမြို့တော်ဝယ်ယူသောအခါငါအခန်းထဲမှာအသုံးပွုနိုငျသနညျး ထိုသို့လုပ်ဖို့ဘယ်လို? သားဖွားမြို့တော်ပေါင်ခံချေးငွေပြန်ဆပ်အတှကျအသုံးပွုနိုငျသညျ။ ဘဏ်များ၏ကန့်သတ်အရေအတွက်စေ့စပ်ချေးအခန်းပေါင်း။ ထဲမှာအိမ်ခြံမြေဝယ်ယူ ...
အရစ်ကျပေးဆပ်မှုအစီအစဉ်ကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ အပေါင်ခံချေးငွေသည်အရစ်ကျပေးသောအစီအစဉ်နှင့်ကွာခြားသည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအနေနဲ့၊ developer အနည်းငယ်သာ 510 နှစ်များအတွက်ရေရှည်အရစ်ကျအစီအစဉ်များရှိသည်။ အများစုသည်တစ်နှစ်အထိအရစ်ကျပေးသည်။ ဤ ...
အကြွေးကပြန်လည်ပြုပြင်ဖွဲ့စည်းခြင်း? သင်တစ်ဦးချေးငွေကိုလက်ခံရရှိခြင်းနှင့်ထိုသို့ဆပ်ဖို့မဆိုအကြောင်းပြချက်မျှမဖြစ်နိုင်ချေရှိလျှင်, vozmozno အကြွေးပြန်လည်ပြုပြင်ဖွဲ့စည်းခြင်းများအတွက်ဘဏ်ကိုဆက်သွယ်: သည်ကိုသင်နှောင့်နှေးဖို့တောင်းစေခြင်းငှါ ...
"ဥယျာဉ်စာအုပ်ဖြင့်ရောင်းချသည်" ဆိုတာဘာလဲ။ ဒီလိုအိမ်မျိုးဝယ်သင့်လား။
"ဥယျာဉ်စာအုပ်ဖြင့်ရောင်းချသည်" ဆိုတာဘာလဲ။ ဒီလိုအိမ်မျိုးဝယ်သင့်လား။ "ဥယျာဉ်စာအုပ်" သည်လည်း၎င်းသည်အသင်းဝင်စာအုပ်ဖြစ်သည် - ဥယျာဉ်၊ နွေရာသီအိမ်တွင်းသို့မဟုတ်မည်သည့်ဥယျာဉ်တွင်မဆိုလူတစ် ဦး ၏အသင်းဝင်ကိုအတည်ပြုသည့်စာရွက်စာတမ်းဖြစ်သည်။
အခမဲ့ရောင်းချခြင်းဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း၊ တိုက်ခန်းများတွင်အခြားရွေးချယ်စရာအရောင်းအ ၀ ယ်များရှိသည် - သင်ပိုင်ဆိုင်သည်။ ရောင်းသည်၊ အခြား ၀ ယ်သည်။ ... အရာဝတ္ထု (တိုက်ခန်း) -to-to အပေါ်တာဝန်ဝတ္တရားများနှင့်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးအခမဲ့
"ALTERNATIVE" နှင့်တိုက်ခန်းတစ်ခန်းဝယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းခြင်းလုပ်ငန်းသည်ဘာကိုဆိုလိုသနည်း။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်တိုက်ခန်းတစ်ခန်းကို ၀ ယ်ရလိမ့်မည်မဟုတ်၊ သို့မဟုတ်မကျန် =) ဤတိုက်ခန်းကိုသင်ဝယ်လိမ့်မည်၊ သို့မဟုတ်သူတို့ကသင့်ကိုအခြားတိုက်ခန်းတစ်ခုပေးမည်ဖြစ်သည်။ ပိုကောင်းတဲ့သဘောမတူဘူး ...
အသစ်သို့မဟုတ် Reseller ပေးတဲ့!
အသစ်သို့မဟုတ် Reseller ပေးတဲ့! ငါသာသစ်ကိုမဝယ်ပါလိမ့်မယ်။ ယခုတွင်သင်သည်ဝယ်ဖို့အသစ်တစ်ခု finish ကိုအတူချက်ပြုတ်နိုငျသညျ, အပေါငျးတို့သအလယ်တန်းထက်စျေးနှုန်းချိုသာသငျသညျအသကျရှငျသို့မဟုတ်မယ့်နေရာရှိသည်ပထမဦးဆုံးအခြေအနေအပေါ်မူတည်ပါသည်။ သငျသညျဆိုပါက ...
တိုက်ခန်းရောင်းရသောအခါ realtors ၏အဘယျရာခိုင်နှုန်းများသောအားဖြင့်ယူ?
တိုက်ခန်းတစ်ခန်းကိုရောင်းသည့်အခါများသောအားဖြင့်အိမ်ခြံမြေရောင်းဝယ်သူမည်မျှရှိသည်။ ဘယ်ဒေသမှာ 3% စောင့်ကြည့်မယ်ဆိုတာငါသဘောတူတယ်။ 20000% မှ2မှကျွန်ုပ်တို့ရှိသည်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့သဘောတူရမယ် ငါတို့နှင့်အတူကပုံမှန်အားဖြင့်ပုံသေဖြစ်ပါတယ် ...
သငျသညျသတိရတိုက်ခန်းအိမ်သူအိမ်သားများရောင်းချမှုနှင့် ပတ်သက်. ပုံမှန်မဟုတ်သောအဘယ်အရာကြေညာချက်?
သငျသညျသတိရတိုက်ခန်းအိမ်သူအိမ်သားများရောင်းချမှုနှင့် ပတ်သက်. ပုံမှန်မဟုတ်သောအဘယ်အရာကြေညာချက်? တစ်မော်စကို၏ဗဟိုမှာရှိတဲ့တိုက်ခန်းဒါမှမဟုတ် Tula ဒေသတွင်မြို့ပြကျေးရွာပြောင်းလဲမှုရောင်းချခြင်း။ ------- ကလေးများ, Non-ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းမရှိဘဲတိုက်ခန်းတစ်မိသားစုငှားရမ်း ...
သင်ဘယ်လိုအများဆုံးပုဂ္ဂလိကနေအိမ်များ၏စျေးကွက်တန်ဖိုးတွက်ချက်နိုင်သလဲ ရိုးရှင်းစွာဘယ်နေရာမှာ .. ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆွေးနွေးချက်ထဲမှာရေး .. နှစ်ကြိမ်တောင်းဆိုချက်များ၏စျေးကွက်ပေါက်စျေး .. ကြော်ငြာများယူပါဝင်ပါသည် .. ဆိုပါက .. .. ကောင်းကောင်းပိုမိုလွယ်ကူကိုလညျးတတျကြှမျးသူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအကဲဖြတ် ...
အဆိုပါ shared ဆောက်လုပ်ရေးကဘာလဲ?
အဆိုပါ shared ဆောက်လုပ်ရေးကဘာလဲ? အဘယ်အရာကိုအိမ်ယာဆောက်လုပ်ရေးအတွက် shared ဆောက်လုပ်ရေး Equity ပါဝင်မှုငါတို့သည်တိုင်းပြည်အတွင်းကျယ်ပြန့်သည်။ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီများသည်ရန်ပုံငွေများကိုကိုင်ဆောင်သူ (ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ) ပြုစုပျိုးထောင်ရန်, နှင့် ...
တစ် ဦး အပေါင်ခံအတွက် "ကြိုတင်ငွေပေးချေမှု" ကဘာကိုဆိုလိုသလဲ
တစ် ဦး အပေါင်ခံအတွက် "ကြိုတင်ငွေပေးချေမှု" ကဘာကိုဆိုလိုသလဲ ဆောက်လုပ်ရေးတွင်ပါ ၀ င်မှုနှင့်ပတ်သက်သည့်သုံးပွင့်ဆိုင်သဘောတူညီချက် (ဆောက်လုပ်ဆဲဖြစ်ပါက) သို့မဟုတ်ရောင်းချခြင်းနှင့်ဝယ်ယူခြင်းဆိုင်ရာသဘောတူညီချက် (အိမ်ပြီးပါက) ကိုအဆုံးသတ်ထားသည်။ + ချေးငွေသဘောတူညီချက်။ ငွေချေးသူ ...
ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတဲ့သူ MGSN realtors?
MGSN အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များ၊ သင်၏အကျွမ်းတဝင်ကိုယ်စားလှယ်၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည် ... ဥပမာ၊ မော်စကိုရှိအေဂျင်စီအများစုသည်သူတို့၏ ၀ န်ထမ်းများ - ကိုယ်စားလှယ်များသာမကဖောက်သည်များကိုပါလိမ်လည်သည်။ ထိုထက် ...
"လာ" သို့မဟုတ် "လာ" ကိုဘယ်လိုရေးရမလဲ။
"လာ" သို့မဟုတ် "လာ" ကိုဘယ်လိုရေးရမလဲ။ သာလာ - လာလာလာသို့မဟုတ်လာ? သူဘယ်တုန်းကမှသူမစဉ်းစားဘူး၊ စကားလုံးတစ်လုံးလောက်ရေးဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုတာယုံကြည်စိတ်ချမှုအပြည့်နဲ့ပြောနိုင်တယ်။
ဘယ်သူငှားသလဲ။ အိမ်ငှားကငှားရမ်းတဲ့သူနဲ့တူတယ်။ အိမ်ရှင်ကအိမ်ရင်ြ - ငှားရမ်းခ၊ အိမ်ငှား / အိမ်ရှင် - အိမ်ရှင်။ နှင့် ...
ငှားကော်မရှင်ကဘာလဲ? ဘယ်လိုအများဆုံးငှားလစဉ်ကြေးအနေဖြင့်မတူ? ငှားရန်ကော်မရှင်နည်း ဒါဟာအေးဂျင့်ကော်မရှင်နာဖြစ်နိုင်သည်?) ဒါကြောင့်သင်တို့အဘို့အေးဂျင့်ပေးဆောင်ကြောင်း denyushki အကယ်. ...
မေးခွန်းတစ်ခုကို realtors ။ အဘယ်အရာကိုများနှင့်ငှားထားတဲ့တိုက်ခန်းကိုဝယ်ခြင်းငှါမော်စကို၏အဘယ်အရာကိုဧရိယာထဲမှာ။
မေးခွန်းတစ်ခုကို realtors ။ အဘယ်အရာကိုများနှင့်ငှားထားတဲ့တိုက်ခန်းကိုဝယ်ခြင်းငှါမော်စကို၏အဘယ်အရာကိုဧရိယာထဲမှာ။ စံပြတိုက်ခန်းနီးပါးမည်သူမဆိုထိုမက်ထရို) ဧရိယာကနေအကွာအဝေး Walking ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူကဗဟိုနှင့်နီးစပ်သောအဖြစ် သာ. ကောင်း၏ ...
အပေါင်ခံအတိုးနှုန်းကိုဘယ်လိုတွက်ချက်သလဲ။ ဥပမာအားဖြင့် - ကျွန်ုပ်သည် 1000 နှစ်အတွက် 000 Rubles ရူဘယ်ကိုနှစ်စဉ် 10% ဖြင့်ယူသည်၊
အပေါင်ခံအတိုးနှုန်းကိုဘယ်လိုတွက်ချက်သလဲ။ ဥပမာ - ငါ 1000 000 ရူဘယ်ကိုနှစ်စဉ် 10% နှုန်းဖြင့်ယူသည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်သည် 12% ပေးဆောင်မည်ဟုဆိုလိုသည်မှာမူလငွေပမာဏမှ 12 1 000 ရူဘယ်။ တစ်လလောက်ကြာတော့မယ်။
Belkin ၏ဝတ္ထု“ The Young Lady-Peasant” ၏အကျဉ်းချုပ်ကိုပေးပါ
Belkin ၏ဝတ္ထု "The Young Lady-Peasant" ၏အကျဉ်းချုပ်ကိုသူ၏ Tugilov ၏အိမ်ခြေရှိဝေးလံသောဒေသများရှိအချိန်ကြာမြင့်စွာမုဆိုးမဖြစ်ခဲ့ပြီးမည်သည့်နေရာတွင်မျှသွားခြင်းမရှိသောအငြိမ်းစားအစောင့်တပ်သား Ivan Petrovich Berestov တွင်နေထိုင်သည်။ သူသည်အိမ်အလုပ်လုပ်သည် ...